FKTLM: Soli Deo, Sola Gratia, Solis Christus, Sola Fide, Sola Scruptura. | mandimby maharo
FKTLM: Soli Deo, Sola Gratia, Solis Christus, Sola Fide, Sola Scruptura.	Posted on 18 September 201218 September 2012 by Mandimby Maharo	Nisokatra androany 18 Septambra 2012 maraina ny Zaikabe faha-18 ny Fiombonan’ny Kristiana Tanora Loterana Malagasy. Any Fandriana, synodam-paritany loterana Fisakana no atao ny fivoriana izay ivahinian’ireo avy amin’ny synodam-paritany 22 hafa eran’ny nosy. Tanora 15 000 no andrasana amin’izao zaika lehibe izao ankoatr’ireo tompon’andraikitra sy mpitaiza ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Lohahevitra ho banjinina mandritra ny fivoriana moa ny hoe “Miorena tsara, aza miova”.
Tonga manotrona ny fotoam-panokafana avokoa ireo manam-pahefana ara-panjakana any amin’iny faritra amoron’imania iny. Nahitana ny lehiben’ny faritra, ny lehiben’ny distrika, ny ireo mpikambana ao amin’ny parlemanta ary ny ben’ny Tanana sy ireo mpiara-miasa aminy tsirairay avy. Nahatonga solon-tena ihany koa ny avy ao amin’ny fiadidiana ny praiministra sy ny ao amin’ny filan-kevitra ambonin’ny tetezamita. Eo rahateo koa ireo tompon’andraikitra maro ao amin’ny FLM, izay tarihin’ny Filohany, Dr Rakoto Modéste. Nanotrona koa ireo pastora maro mpikambana ao amin’ny foibe loterana ary indrindra indrindra ireo manana andraikitra amin’ny fitaizana ny tanora.
Niverimberina nadritra ny fandraisam-pitenena’ireo olo-manan-kaja maro ireo ny fisaorana ny Flm nifidy ny hanaovana izao fivoriana izao ao Fandriana. Raha ny toetany sy ny toetrandro tokoa manko dia toerana mangatsiaka iny faritra iny saingy nofidiana izany anatanterahana izao fivoriana lehibe izao. Mitondra fanantenana ho azy ireo araka izany ny nifidianana azy satria tsy mahatsiaro ho adino ireo mponina ireo. Maro rahateo ireo mpiara miombon’antoka amin’izao zaika izao: ao ny Jirama izay nametraka jiro sy nitarika ny rano ho ao an-tanana raha niaina tao anaty aizina izany nandritra ny iray taona mahery izay. Eo ihany koa ny Telma sy ny Tvm ary Rnm hampita mivantana izao fivoriana izao. Ankoatr’ireo, eo koa ireo zanaka am-pielezana maro nanampy ara-pitaovana sy vola ary hevitra ho entina anatanterahana izany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia nanatitrantitra ny filohan’ny FLM ny hanajan’ny tanora Ray amandReny. Io no tiana ho asongadina amin’izao lohahevitra izao araka izay voalazan’ny Didy fahefatra sy izay dikan’izany. Irina ary hoy izy ny mba andraisan’ny tanora lesona sy torolalana maro momba izany mandritra ity fivoriana ity ha tsy hiova amin’ny maha tanora azy izy ireo. Nanipy teny ho an’ireo mpanampy tamin’izao hetsika izao koa izy ny mba hanaovana izany noho ny fahasoavana sy ny fitiavana fa tsy dia ny resaka ara-barotra na ara-politika no hanery.
Haharitra herinandro moaizao fivoriana izao. Hisy ny fianarana soratra masina, antsam-piderana, lasy ankoatry ny fotoam-bavaka mandritra izany. eo koa ny afomanga lehiba anio alina entina ampifalifaliana ireo mponina sy ireo mpizaika . Ary araka izay efa voalaza dia halefa mivantana ao amin’ny televiziona sy ny radiom-pirenena.